Soosaarka Karootada Shiinaha iyo Warshad | Nongchuanggang
Sharaxaada wax soo saarka karootada: Qiyaas ahaan. 5-7 karootada halkii kiilo - laakiin tirada dhabta ah way kala duwanaan kartaa. Karootada waxaa loo cuni karaa ceyriin ahaan sida cunnooyinka fudud, ama waa la kariyaa waxaana loo isticmaali karaa macaan iyo qaar ka mid ah suxuunta macaan, sida keega dabacasaha ama muufada. Waa la kariyey, la kariyey, la dubay, la dubay, la dubi karaa, la shiidi karaa ama microwave. Karootada waa in la kariyaa illaa ay jilicsan yihiin laakiin wali wax yar bay isku urursan yihiin. Ama kariyo karootada illaa ay jilicsan yihiin oo milix ama nadiifi. Karootada ayaa ah isha khudradda ee ugu qanisan fiitamiin a, laga bilaabo beta-carotene. Hal karooto oo dhexdhexaad ah ayaa bixisa in ka badan inta lagu taliyay in la qaato maalintii. Karootada sidoo kale waa isha laga helo fiber-ka cuntada, fiitamiin c iyo niacin.
Karootin ku jirta karootada ayaa ah isha ugu weyn ee laga helo fiitamiin A, fitamiin A-na wuxuu kor u qaadi karaa koritaanka, wuxuu ka hortagi karaa infekshinka bakteeriyada, wuxuuna ilaalin karaa unugyada epidermal, habka neef mareenka, habka dheefshiidka, nidaamka kaadi mareenka iyo unugyada kale ee epithelial. Faytamiin A la’aanta ayaa sababi doonta xerosis isku xiran, indho beel habeenkii, indho beel, iwm, iyo sidoo kale muruqyada iyo xubnaha gudaha oo soo baxa, xumaanshaha xubnaha taranka iyo cuduro kale. Celcelis ahaan dadka qaangaarka ah, qaadashada fitamiin A maalin kasta waxay gaareysaa 2200 unugyo caalami ah, si loo ilaaliyo howlaha nolosha caadiga ah. Waxay leedahay shaqada ka hortagga kansarka, taas oo badanaa loo aaneeyo xaqiiqda ah in carotene loo beddeli karo fitamiin A ku dhaca jirka aadanaha.
Nooca Badeecada Khudaar la'aan Umbelliferous
Kala duwanaansho Karootada
Nooca Beerista CAADI
Cabbirka (cm) 18
Miisaanka (kg) 10
Lambarka Moodalka karooto
Magaca badeecada Karootada Cusub ee Shiinaha
Dalagyada 2020 Dalagga Cusub
Midab Liinta Casaanka ah
Asal ahaan Shiinaha
Xirxirida 8kg / 9kg / 10kg / 20Kg Kartoon
TAYO Darajada Sare
Waqti bixinta Wareega Sanadka
Muuqaalka Faytamiin badan
Hore: Karootada fuuqbaxay
Xiga: Miro la qaboojiyey